सम्झनयोग्य धेरै काम गरेका छौ « Anumodan National Daily
सुश्री कौशिला भट्ट
अध्यक्ष,भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुरा
डडेल्धुरा जिल्लाको साविक बगरकोट, भागेश्वर र रुपाल गाविसलाई मिलाएर वर्तमान भागेश्वर गाउँपालिकाको स्थापना भएको हो । डडेल्धुरा सदरमुकामबाट १४ किमी पश्चिममा रहेको सोगाउँपालिकाको नामाकरण यस क्षेत्रकै प्रसिद्ध मन्दिर भागेश्वरको नामबाट राखिएको हो ।
पाँचवटा वार्ड रहेको सोगाउँपालिकाको जनसंख्या १४ हजार १२९ रहेको छ । धार्मिक पर्यटन, लघु जलबिद्युत, जडिबुडी उत्पादन तथा प्रशोधन र प्राबिधिक शिक्षाको प्रचुर सम्भावना भएको सो गाउँपालिकामा पर्यटकीय स्थलहरु झरना, महाभारत लेक लगायत भारतसंगै जोडिएको रुपालको सेरोले झनै सुन्दरता देखाएको पाइन्छ । यससँगै बगरकोट कमलताल, भागेश्वर मन्दिर धुरा, बोगटा ऐतिहासिक कोट पनि यहाँ पर्दछन् ।
सो गाउँपालिकामा गत स्थानीयतहको चुनवामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कौशिला भट्ट निर्वाचित भएकी थिइन् । नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय कार्य समितिमा समेत काम गर्नु भएकी ३० वर्षीया भट्ट नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत हुन्। २७ वर्षको उमेरदेखि नै स्थानीय तहको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी भट्ट स्पष्ट र खरो स्वभावकी नेतृका रुपमा परिचित छिन् । प्रस्तुत छ विकास निर्माण लगायतका विषयमा गाउँपालिकाकी अध्यक्ष भट्टसँग पत्रकार हिक्मतबहादुर सिंहले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
चुनावीदौडका बेलातँपाईले मतदाताहरुको प्रमुखआवश्यकताहरु के के सुन्नुभएको थियो ?उनीहरुकाआवश्यकता र मागलाई पुरा गर्न कसरी कामगरिराख्नुभएको छ ?
विद्युत, सडक, खानेपानी, शिक्षा, सिंचाई, बेरोजगारी, गरिवीभागेश्वर गाउँपालिकाको प्रमुख समस्याहुन् । जनताले पनितिनै कुराको समाधानखोजेका छन् । जनताका माग अनुसार नै कृषि सडक विस्तार गर्दै हरेक गाउँसम्म सडक पुगाउने अभियान अघि सारेर सडक निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । विद्युत विस्तार, शिक्षा तथा खानेपानीलाई प्राथमितामा राखेर कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएका छौ । जनताकाआवश्यकतालाई प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्ने गरेर काम अघि बढाइएको छ । दुर्गम पालिका भएकाले ग्रामीण वस्तिमा विद्युत नहुँदा धेरै समस्या रहेको छ ।
कार्यपालिकामातँपाई अल्पमतमा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामाकामगर्न कत्तिको कठिनाइ भोगिरहनु भएको छ ?
त्यस्तो धेरै चुनौतीपनि छैन । किनभने हामीसँग आउने समस्या योजना भनेको जनताका योजनाहरु भएकाले हाम्रो व्यक्तिगत योजना भन्दा सामुहिक योजनालाई प्राथमिकता दिएको हुनाले त्यति धेरै असहज भएको छैन ।
डडेल्धुराको विकट गाँउपालिकाकारुपमापनि यो पालिका परिचित छ, यहाँको भौतिकपूर्वाधार र सामाजिकविकासका क्षेत्रमामुख्य रुपमा के कामहरु भएका छन् ?
गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जाल पुगाइएको छ । विद्युतीकरणका लागि उज्यालो भागेश्वर कार्यक्रममार्फत काम भइरहेको छ । प्राविधिक शिक्षा, कृषि प्राविधिक शिक्षाको पढाई सुरु भएको छ । गुणस्तरिय शिक्षाका लागि २० जनास्वयम् सेवक शिक्षक भर्ना गरेर पढाई सञ्चालन भइरहेको छ । आधुनिक शौचालय निर्माण भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमाघरमा सुत्केरी शुन्य कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ ।
महिला बालबालिकालाई महिला तथा बालबालिको पोषण सुधारका लागि अण्डा वितरण कार्यक्रम चलाइएको छ । गर्भवतीले निरन्तर चेकजाँच गरुन भनेर अण्डा वितरण कार्यक्रम र कोही पनि महिला घरमा सुत्केरी नहुन भन्ने उदेश्यले अध्यक्षको कोसेली कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । कृषिका पकेट क्षेत्र, खानेपानीका समस्या समाधान गर्नका लागि ग्रामिण जलश्रोत व्यवस्थापन परियोजना र भागेश्वर गापाको सहकार्यमा एक घर एक धारा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । किसानका लागि उत्पादित वस्तुहरु संकलन गर्न शितगृह बनाइएको छ ।
अब त कार्यकालको ७५ प्रतिशत पुरा भयो, जनताकागुनासाहरु पनिहोलान्, जनताबाट अपजस नआओस भनेर तपाईले विशेषगरि के विषयलाई प्राथमिकता राखेर काम अगाडि बढाउनुभएको छ ?
कार्यकालको ७५ प्रतिशत पुरा हुने बेलासम्म हामीले धेरै काम गरिसकेका छौ । मानिसका आवश्यकता पुरा गर्ने सीमितसाधनभएकाले सबै समस्या एकैचोटी समाधानगर्न नसके पनि धेरै समस्या समाधान गरिरहेका छौ । जनताका माग अनुसारका काम सबैलाई प्राथमिकतामा राखि अगाडि बढाएका छौ । विषेश गरेर सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पर्यटन कृषिका कामहरु विशेष प्राथमिकतामा राखि अगाडि बढेका छौ ।
गाउँपालिकालाईनमुनाका रुपमाचिनाउनतँपाईले दीर्घकालिन योजना के के ल्याउनु भएको छ ?
प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भइसकेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि लगानी गरेका छौ । विद्युतीकरणलाई जोड दिएका छौ । अस्पताल सञ्चालनका लागि काम अगाडि बढिसकेको छ । सुपथ मूल्य फार्मेसी सञ्चालन गरेका छौ । कोरोनाका विरामीहरुका लागि आईसोलेसन घर निर्माण गरेका छौ । कृषिउपज भण्डारणका लागि शितगृह निर्माण गरेका छौ ।विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यहरु भएका छन् । गाउँपालिकाको दुर्गमबस्तीमा सडक पुगाएका छौ र केही बस्तीहरुमा सडक पुग्ने चरणमा छ । यसैगरी पर्यटनका क्षेत्रहरुको प्रचारप्रसार र पर्यटकहरु सहज रुपमा पुग्ने गरेर बाटो निर्माण गरिएको छ ।
प्रदेशर सङ्घीय सरकारसंगको समन्वयकस्तो रहेको छ ?
समन्वय त्यति धेरै छैन । प्रदेशबाट आउने योजनाहरुको बारेमाहामीलाई केही थाहाहुदैन । गाउँपालिकामा आउने बजेटका बारेमा स्थानीयतहलाई जानकारी हुनु जरुरी छ भने अर्को कुरा योजनाहरु राजनीतिक दवाव र मनखुसी तरिका भन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित रहेर प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरु छनौट गरे बजेट प्रभावकारी रुपमा लागू हुने थियो । विकासका लागि तीनै तहको समन्वय बढाउनु जरुरी देखिन्छ ।
गाउँपालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ? शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सर्वसुलभरुपमा स्वास्थ्य सेवाप्रदानगर्न के कस्ता गतिविधिहरु अघि बढाउनुभएको छ ?
पहिलाको तुलनामा धेरै राम्रो छ । गाँउमा अस्पताल सञ्चालन गरेका छौ । प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्था निर्माण र जनशक्ति परिपूर्ति गरेका छौ । गाउँएकाई केन्द्र स्थापना भएका छन् । महिनामा घुम्ति शिविर संचालन भएका छन् । स्वयम्सेवक शिक्षकहरु राखेका छौ । पूर्वाधार र माविहरुमा ईन्टरनेटको सुविधा थपेका छौ । ईहाजिरी जडान भएको छ । प्राविधिक शिक्षा संचालन गरेका छौ ।शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको सुझावका आधारमा समय समयमा आवश्यकता लिमहरु पनि सञ्चालन गरिएका छन् ।
कोरोना सङ्क्रमितहरुको संख्यादिनानुदिन बढ्दै गएको छ,उहाँहरुको उपचार र परामर्शका लागिपालिकाले कसरी काम गरेको छ ?
गाउँपालिकाको लगानीमा आईसोलेसन केन्द्र निर्माण गरेका छौ । सो सेन्टरमा एक जना विशेषज्ञ डाक्टर र दुई जना स्टाफ नर्सको व्यवस्था मिलाइएको छ । गाउँ समुदायमा कोरानाबाट बच्नका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गरेका छौ ।
तपाई महिला हुनुहुन्छ, अध्यक्ष भएपछि महिलाको र सिमान्तकृत समूदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउनुभयो ?
हाम्रो पालिका एकदम विकट रहेको छ । म महिला अध्यक्षभएको कारणले महिलासंग सम्बन्धित कार्यक्रम केही हदसम्म वढी नै भएतापनि ग्रामीण भेगको मानिसको आर्थिक स्थिति उकास्ने एउटा मात्रआधार भनेको कृषिहो, त्यहीभएर कृषिमा नै महिलाहरुको संलग्नता बढाउने गरेर कृषिको आधुनिकरण गर्ने काम गरिरहेका छौ । महिलाहरुलाई सीपमुलक कार्यक्रमहरुमा जोडेका छौ । महिलाहरुलाई क्षमता भन्दा पनि सीपमुलक तालिमको बढी आवश्यकता ठहर गरेकाले वडा तथा बस्ती भेलाबाट महिलाहरुले माग गरेका कार्यक्रमलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आफ्नो कार्यकालको सम्झिनयोग्यकामहरु के रहेका छन् ?
उज्यालो भागेश्वर कार्यक्रम,मर्यादित छुईवर्ष अभियान २०७५, छात्राहरुका लागि माध्यमिक विद्यालयहरुमा सेनिटरि प्याड निशुल्क वितरण, एक वालक एक फलफुलको बोट कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरेर रोजगारीमुलक पढाई सञ्चालन, एक घर एक धारा कार्यक्रम लगायतका धेरै काम गरेका छौ । मर्यादित छुई अभियानले महिलाहरु महिनावारी हुँदा घरमै बस्ने अवस्था सृजनाभएको छ ।